Qaraarka Ruushka ee Xabad-joojinta Siiriya oo cod loo qaadayo | Warsugan News
Home Wararka Qaraarka Ruushka ee Xabad-joojinta Siiriya oo cod loo qaadayo
Qaraarka Ruushka ee Xabad-joojinta Siiriya oo cod loo qaadayo
NEW YORK – war sugan Gollaha amniga ee Qaramada Midoobey ayaa maanta gelinka danbe ee sabti a h cod u qaadi doona qaraarka dalka Ruushka ee xabbad-joojinta dalka Siiriya.
Qaraarkan ayaa ku baaqaya in si degdeg ah kaalmo gargaar bini’aadanimo ah la gaarsiiyo dhamaan dalka Siiriya.
Dhanka kale jabhada awooda badan ee dalka Siiriya ee Nusra ayaa cambaareysay xabbad-joojinta dhawaan la gaaray.
Jabhada Nusra ayaa lagu tilmaama in ay xiriir la leedahay ururka Al-qaacida.
Jabhada Nusra ayaa sheegtay in ay sii-wadeyso dagaalka ay kula jirto Xukuumadda Bashar Al-Asad.
Xukuumadda Siiriya ayaa dhankeeda ka hadashay Jabhadan ,waxayna sheegtay ineysan qeyb ka ahayn Xabbad-joojinta.
Xabbad-joojintan la gaaray ayaa waxaa kasoo shaqeeyey dowladaha Ruushka iyo Turkiga,waxaana sidoo kale filayo in Xabbad-joojintan ay ogolaato Qaramada Midoobey.
Previous PostMadaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo diiday in uu Tarxiilo Diblomasiyiinta Mareykanka Next PostDowladda somaliy oo soo bandhigtay maydadka Shabaabkii weerarka ku soo qaaday degmeda Afgooye